BitCredit စျေး - အွန်လိုင်း BCR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitCredit (BCR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitCredit (BCR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitCredit ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitCredit တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitCredit များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitCreditBCR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0461BitCreditBCR သို့ ယူရိုEUR€0.0391BitCreditBCR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0353BitCreditBCR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.042BitCreditBCR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.412BitCreditBCR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.291BitCreditBCR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.02BitCreditBCR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.172BitCreditBCR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.061BitCreditBCR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0643BitCreditBCR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.03BitCreditBCR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.357BitCreditBCR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.251BitCreditBCR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.45BitCreditBCR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.7.76BitCreditBCR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0632BitCreditBCR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0701BitCreditBCR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.43BitCreditBCR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.32BitCreditBCR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.92BitCreditBCR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩54.55BitCreditBCR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦17.67BitCreditBCR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.4BitCreditBCR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.27
BitCreditBCR သို့ BitcoinBTC0.000004 BitCreditBCR သို့ EthereumETH0.00012 BitCreditBCR သို့ LitecoinLTC0.000847 BitCreditBCR သို့ DigitalCashDASH0.000508 BitCreditBCR သို့ MoneroXMR0.000518 BitCreditBCR သို့ NxtNXT3.59 BitCreditBCR သို့ Ethereum ClassicETC0.00679 BitCreditBCR သို့ DogecoinDOGE13.3 BitCreditBCR သို့ ZCashZEC0.000559 BitCreditBCR သို့ BitsharesBTS1.42 BitCreditBCR သို့ DigiByteDGB1.47 BitCreditBCR သို့ RippleXRP0.164 BitCreditBCR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00159 BitCreditBCR သို့ PeerCoinPPC0.153 BitCreditBCR သို့ CraigsCoinCRAIG21 BitCreditBCR သို့ BitstakeXBS1.97 BitCreditBCR သို့ PayCoinXPY0.805 BitCreditBCR သို့ ProsperCoinPRC5.78 BitCreditBCR သို့ YbCoinYBC0.00002 BitCreditBCR သို့ DarkKushDANK14.79 BitCreditBCR သို့ GiveCoinGIVE99.83 BitCreditBCR သို့ KoboCoinKOBO10.5 BitCreditBCR သို့ DarkTokenDT0.0424 BitCreditBCR သို့ CETUS CoinCETI133.12
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 00:20:03 +0000.